MM Abiy Ahimad addatti koree hoji raawwachiiftuu 'TPLF' dubbisuufi - BBC News Afaan Oromoo
17 Sadaasa 2019
Koreen hojii raawwachiiftuu ADWUI addicha walitti baqsuun paartii tokko ijaaruuf qorannoo dhiyaatef irratti mari'atee sagalee mormii 6'n sagalee caalmaan raggaasiseera.
Walgahii guyyaa Sambataa magaala Finfinneetti taa'ame kanarratti miseensonni koree hoji raawwachiiftuu paartilee miseensa ADWUI afran akkasumas dura taa'aa fi dura taa'aa itti aanaan dhaabbilee deeggartootaa hirmaataniiru.
Addichi walitti baquun paartii biyyaalessaa tokko ta'uu kan morman miseensota koree hoji raawwachiiftuu 'TPLF' akka ta'an wal gahicharratti kan hirmaatan miseensi koree hoji raawwachiiftuu 'TPLF' Obbo Asmallaash Waldasillaasee BBC'tti himaniiru.
Akka Obbo Asmallaash jedhanitti, hogganaa duraanii tika biyyaalessaa kan ture Geetaachoo Asaffaan malee miseensonni koree hoji raawwachiiftuu 'TPLF' hundi wal gahicharratti hirmaataniiru.
Miseensonni koree hoji raawwachiiftuu 'TPLF' wal gahicharratti hirmaatan hundi "ejjennoo dhaaba isaaniitti cichanii bahanii" jedhu Obbo Asmallaash.
Namoonnii sagalee mormii dhageesisan jaha qofa ta'uun, wayita sagaleen kennamu bahanii deebi'anii galuun jidduu jidduun waan tureef malee hundi isaanii ejjennoo tokko akka qaban himu.
Koreen hoji raawwachiiftuu ADWUI har'as itti fufee haala haala addicha walitti baqsan irratti kan mari'atu yoo ta'u miseensonni koree hoji raawwachiiftuu 'TPLF' wal gahii har'aarratti akka hin hirmaannes Obbo Asmallaash BBC'tti himaniiru.
Haa ta'u malee MM Abiy Ahimad miseensota koree hoji raawwachiiftuu 'TPLF' waliin addati mari'achuuf sagantaa qabachuu himaniiru.
Itti dabaluunis 'TPLF' walitti baquu ADWUI ilaalchisee armaan duras ejjennoo isaa ibsateera kan jedhan Obbo Asmallaash, adeemsi walitti baquu kun hanga yaa'ii waliigalaatti itti fufa, hin xumuramne jedhan.
Murtee 'TPLF' itti aanu ilaalchisuunis "amma booda koreen jiddu galeessaa 'TPLF' ejjennoo fi kaayyoo dhaabicha qofarratti fuulleffatee hojjeta, egeree dhaabichaas dhaabichuma malee humni biraa murteessuufii hin danda'u," jedhan.
Walitti baquu ADWUI ...
Waggoota 30'tti siqaniif Itoophiyaa bulchaa kan ture ADWUI'n adda ykn walta'iinsa paartilee naannoo afurii ta'ee ijaarame.
Addi kun walitti baqee paartii biyyaalessaa tokko ta'uuf galma akka qabuufi waggoota dheeraafis irratti dalagaa akka ture aanga'oonni addichaa yeroo gara garaa himaa turan.
Sababoota adda addaan lafarra harkifataa kan ture imalli walitti baquu addichaa guyyaa kaleessaa xumura waan argate fakkaata.
MM Abiy Ahimad gama twitter'n ergaa dabarsaniin "ADWUI walitti baqsuuf wal gahiin taa'ame bu'aa gaarii argamsiiseera jedhan.
''Walitti baquun kun sirna federaalaawaa Itoophiyaa kan cimsu, naannolee sagaleen isaanii ukkaamamee tureef daandii kan saaquudha'' jedhan.
''Tarkaanfiin kun heddummina sabaa fi sablammootaa kan keessummeessu, hirmaachisummaa fi bakka bu'ummaa haqa qabeessa ta'e kan mirkaneessuudha. Tokkummaan biyyaalessaa heddummina sabaa fi sab-lammootaa waliin wal hidhatee akka dagaaguuf karra bana.'' jedhan.
Koreen hoji raawwachiiftuu ADWUI wayita walga'ii isaa gaggeessetti miseensota isaan alatti paartilee naannoo Somaalee, Affaar, Beenishaangul Gumuz, Gaambeelaa fi Hararii irraas hirmaachiseera.
Akkaataa walitti baquu paartilee irratti mariin erga gaggeeffamee booda miseensonni koree hoji raawwachiistuu paartilee arfanii sagalee mormii ja'aan sagalee caalmaadhaan mirkaneessaniiru.
Paartiin walitti baqe maal fidee dhufa?
Misensa kore raawwachiiftuu ADWUI kan ta'an Obbo Fiqaaduu Tasammaa walgahii Sambataan booda ibsa etv'f kennaniin, walgahicharratti dhimmootni akka sirna bulchiinsa federaalawaa amma jiru, eenyummaa sabaa fi biyyaalessaa, bakka bu'iinsa haqa qabeessa ta'eefi kaan irrattis mari'atamuu himan.
Paartii walitti baqee ijaaramu kanaaf utubaadha kan jedhan qabxiilee shanis himaniiru.
1. Sirni federaaliizimii sab-daneessaa fi dimokiraatawaa ta'ee jabaatee akka itti fufuufi kunis dambii ittiin bulmaata paartichaa keessa akka jiraatu.
2. Mirgi heera mootummaa ofiin of bulchuu fi hiree ofii ofiin murteeffachuu naannolee akka kabajamu.
3. Dhaabbilee deeggartoota dabalate saboota, sablammootaa fi uummattoota hunda kan of keessatti qabate, bakka bu'iinsi haqa qabeessi akka jiraatu.
4. Eenyummaa sabaa fi tokkummaa biyyaa jabeessee waliigalchiisee siyaasa biyyattii hogganuu.
5. Afaanotni hedduun jiraachuu hubachuun dhaaba af-daneessa ta'e uumuu.
Murteen itti aanu...?
Dhimma paartilee walitti baqsuun paartii biyyaalessaa tokko uumuurratti murteen koreen hoji raawwachiistuu ADWUI dabarse asumarratti dhaabbata miti.
Walga'ii mana maree ADWUI kan waggaa lamatti al tokko taa'amurratti dhiyatee irratti mari'atama.
Manni maree kun miseensota 180 of keessaa kan qabu yoo ta'u murteewwan ijoo ta'an dabarsuuf aangoo qaba.
Adeemsa kana keessa erga darbee booda yaa'ii guddicha ADWUI kan naannolee arfan irraa bakka buutota hedduu hirmaachisu irratti dhiyaata.
'Waraanni nurratti labsamee ture'
Erga yaa'ii kanarratti dhiyaatee irratti mari'atamee boodadha partileen arfan ADWUI uuman walitti baquun paartii biyyaalessaa tokko ta'uun kan mirkanaa'u.
Dhaabbilen arfanis yaa'ii waliigalaa ofii ofii isaanii yaamanii murtee kana raggaasisun irraa eeggama.
Ibsa ODP: 'Warraaqsa Dimookiraasii Ida'amun bakka buusuuf mari'atamaa jira'
Dabratsiyoon GabraMikaa'el (PhD): 'Waraanni nurratti labsamee ture'